Dispare को चित्रण गर्ने सही तरीका - टाइटनमा आक्रमण - क्र्याडल दृश्य
जीन्स साथीलाई टाइटनले खोसेको छ
by Dima 20th अक्टोबर 2021 12th जनवरी 2022
एक टिप्पणी छोड Dispare को चित्रण गर्ने सही तरिकामा - टाइटनमा आक्रमण
सल्लाह दिनुहोस्: यस लेखमा ग्राफिक सामग्री समावेश छ जुन सबै उमेरका लागि उपयुक्त नहुन सक्छ।
अनुमानित पढ्ने समय: 13 मिनेट
को सारांश AOT पर्याप्त डरलाग्दो छ - विशाल मानवीय मानव-भक्षी भनिन्छ Titans जसको एक मात्र चासोले मानिसलाई पूरै निलिरहेको छ - यो सुरुदेखि नै दुःस्वप्न हो। त्यसोभए यो शृङ्खलाले निराशालाई कसरी हेर्छ र अझ महत्त्वपूर्ण रूपमा श्रृंखलामा देखाइएका पात्रहरूको व्यक्तिगत प्रतिक्रिया र कठिनाइहरू? यो के हो म यस लेखमा अनप्याक गर्दैछु त्यसैले कृपया आफूलाई सहज बनाउनुहोस् जब हामी पर्खालहरू बाहिरको रक्तपातपूर्ण संसारमा डुब्छौं।
आर्मिनले टाइटन देख्छ
प्रारम्भिक एपिसोडबाट सुरु गरौं, जहाँ मेरो बङ्गारा धेरै पटक खस्यो, विशेष गरी एपिसोडको पछिल्ला भागहरूमा र पक्कै पनि अन्त्यमा। के भयो हेर्दै इरेनको आमा साँच्चै कष्टदायी हुनुहुन्थ्यो र यसले मलाई मेरो हृदयमा स्तब्ध बनायो।
इरेन र मिकासाको हारको पूर्ण त्रास फेरि हेर्नुहोस्:
एरेनको आमालाई टाइटनले खायो (एपिसोड १, सिजन १)
एउटा एपिसोडको लागि यस्तो अद्भुत र विस्फोटक सुरुवात, भावनाहरू पहिले नै अविश्वसनीय रूपमा उच्च चलिरहेको छ, र अहिले हाम्रो लागि धेरै खतरामा छ। वर्ण र मानवता, यो किन यो हेर्न सजिलो छ श्रृंखला पहिलो पटक रिलीज हुँदा धेरै ध्यान प्राप्त भयो।
तर यो पूरै शृङ्खला होइन जुन म यस एपिसोडमा छलफल गर्न जाँदैछु तर पहिलो सिजनमा मैले थप याद गरेको कुरा। म एक व्यक्तिगत लेख लेख्न जाँदैछु AOT चाँडै तर त्यो अर्को दिनको लागि हो, त्यसैले सम्पर्कमा रहनुहोस्।
Titans पछाडिको अवधारणा हेर्दै
एक टाइटन तल लगाइएको छ
निराशाको बारेमा मेरो समग्र बिन्दु बुझ्नको लागि AOT हामीले हेर्नु पर्छ Titansतर अझ महत्त्वपूर्ण कुरा तिनीहरूको डिजाइन। द Titans एनिममा डरलाग्दो छन्, कम्तिमा भन्नको लागि। तिनीहरूको एउटै उद्देश्य मानिस खोज्ने र खाने हो। त्यही भयो। तिनीहरूको अन्य जनावर वा जीवहरूमा कुनै चासो छैन र एक मात्र चासो छ। सुरु देखि, हामीले देख्यौं कि तिनीहरू कत्ति डरलाग्दो थिए, तिनीहरूले कसरी शिकार गरे र मानिसहरूलाई खाए।
दोस्रो भ्यानगार्ड कप्तान माइक3टाइटन्स द्वारा खाएको छ
हामी पछि जान्दछौं कि Titans उदाहरणका लागि घोडाहरू जस्तै अन्य जनावरहरूमा रुचि छैन। केवल मानवहरू। यसले तिनीहरूलाई अलि बढी मालवाहक बनाउँछ किनभने सामान्यतया यस्तो चीजको अवधारणा मानवजातिको लागि मात्र होइन, तर संसारको लागि शत्रु हुनेछ।
यो किनभने, मानव रूपमा, तिनीहरूले जनावरहरू र अन्य लक्ष्यहरूको सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि वहन गर्नेछन् Titans आकर्षित हुन सक्छ। जे होस्, यसको सट्टा, यो केवल मानिसहरू हो तिनीहरू पछि छन्। र त्यसैले, त्यहाँ केवल 1 डर छ, र त्यो द्वारा खाएको छ Titans.
एरेनको आमालाई खाएको टाइटन देखिन्छ।
साथै यो पनि हामी श्रृंखला भर मा जान्दछौं, को बारे मा जानकारी को सानो टुक्रा Titans। यो तिनीहरूमा सबै जानकारीहरू जस्तो छैन र तिनीहरूको अस्तित्व अन्तको नजिकको केही संवादमा मात्र बाहिर फैलिएको छ जहाँ हामी वास्तवमै तिनीहरूको वास्तविक उद्देश्यको बारेमा जान्दछौं।
जीनले नेता हुनुको जिम्मेवारी महसुस गर्छ
यसको सट्टा, हामीलाई पजलका साना भागहरू खुवाइन्छ त्यसैले हामी बिस्तारै तिनीहरूको बारेमा हाम्रो दिमागमा केही प्रकारको विचार निर्माण गर्छौं, समयको एक बिन्दुमा सबै महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू चम्मच-फेड गर्नुको सट्टा। यो उत्कृष्ट छ किनभने हामी अन्त्यको नजिक पुग्नु अघि टाइटन मा आक्रमण, प्रशंसकहरू पहिले नै टाइटनको वास्तविक उद्देश्य के हो भनेर उनीहरूको टाउकोमा कल्पना गर्दैछन्। र निस्सन्देह, यसले थप जान्न आवश्यक इन्धन गर्दछ।
मिकासा र आर्मिनलाई एरेनले बचाएका छन्
यसले टाइटन्सको सम्पूर्ण अवधारणालाई धेरै निराश बनाउँछ किनभने अनिवार्य रूपमा, हामी केवल क्यारेक्टरहरू मात्र जान्दछौं। हामी अब वास्तवमै थाहा छैन। यो अन्त्यमा जस्तै केहि अपरंपरागत दृश्यहरूको लागि सत्य होइन सीजन 2, जहाँ हामी देख्छौं के जस्तो देखिन्छ Titan's सृष्टिकर्ता भित्ता तर्फ मैदानहरू हेर्दै। यो एक एपिसोड समाप्त गर्न को लागी एक राम्रो तरिका हो र निश्चित रूप देखि दर्शकहरु को यो मान्छे को हो र किन भित्ता हेर्दै छ सोच्न छोड्छ।
सर्वे कोरको क्रेस्ट
अर्को सिजनका लागि धेरै वैध र महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको जवाफ दिन आवश्यक छ। यो डरको कारण हो कि जस्तो मलाई लाग्छ Titans साँच्चै आकर्षक छ। हामी सिक्छौं जब क्यारेक्टरहरू सिक्छन् (सामान्यतया) र यसले हामीलाई कहिलेकाहीं क्यारेक्टरहरूसँग बलियो सम्बन्ध राख्न अनुमति दिन्छ, विशेष गरी जब तिनीहरूले मार्छन्। Titans.
को सन्दर्भमा कुरा गर्न अर्को कुरा Titans शृङ्खला अघि बढ्दै जाँदा तिनीहरू कसरी अगाडि बढ्छन्। पहिले, हामी सोच्छौं कि तिनीहरूले मानिसहरू मात्र खाए। त्यसपछि हामीले महसुस गर्छौं कि त्यहाँ अन्य टाइटन्सहरू छन् जो फरक छन् (द महिला टाइटन) अरुलाई पनि आक्रमण गर्छ Titans जब तिनीहरू बाटोमा आउँछन्। हामीले पनि केही सिक्ने गर्छौं Titans फरक छ क्षमताहरू र उद्देश्य.
टाइटनहरूले पत्ता लगाउँछन् जहाँ जीन र बाँचेकाहरू लुकेका थिए
यस सँधै परिवर्तनशील सिद्धान्त र ज्ञानको बारेमा Titans मा टाइटन मा आक्रमण ब्रह्माण्ड तिनीहरूको बारेमा समान रूपमा र नयाँ साझा डर आउँछ।
त्यहा छन् Titans कसलाई मार्न सकिँदैन? त्यहा छन् Titans जसले धेरै भूमिगत खन्न सक्छ? त्यहा छन् Titans कसले हावामा साँच्चै उच्च उफ्रन सक्छ? - हेर्नुहोस्, त्यहाँ धेरै सम्भावनाहरू छन् र ती सबै छन् बराबरी डरलाग्दो जस्तै सूची जारी र मा जान सक्छ।
यो के बनाउँछ Titans र तिनीहरूको सम्पूर्ण एनिग्मा औसत एनिम फ्यानको लागि अधिक र अधिक आकर्षक।
इरेन र मिकासाले आफ्नो आमालाई खाएको टाइटन देख्छन्
के टाइटन्स दिग्गजहरूको निरन्तरता/गाढा अभिव्यक्ति हो?
म पक्का छु की अवधारणा टाइटन पहिले सिर्जना गरिएको छ तर निश्चित रूपमा तिनीहरूमा भएको हदसम्म होइन टाइटन मा आक्रमण। तिनीहरू राक्षसको आफ्नै वर्गमा छन्, केवल एक "विशाल" भनिनबाट प्रतिरक्षा, तिनीहरू धेरै डरलाग्दो र धम्कीपूर्ण छन्। तिनीहरू मेरो विचारमा दिग्गजहरू भन्दा बढी बौद्धिक देखिन्छन्।
एक अर्थमा, हामीले यस शृङ्खलामा जति धेरै सिक्ने गर्छौं, त्यति नै गाढा र गाढा हुँदै जान्छ। उदाहरणका लागि जब कप्तान लेवी र Erwin जान्नुहोस् कि तिनीहरूले वास्तविक मानिसहरूलाई सधैं मार्दै आएका छन्। अनि त्यो Titans मा रूपान्तरित भएका मानिसहरू हुन् Titans.
जीनले आफ्नो साथीलाई टाइटन्सले खाएको हेर्छन्
फेरि, यसले धेरै अन्य प्रश्नहरू खोल्छ। किन वा कसैले मानिसहरूलाई परिवर्तन गर्दैछ Titans? के यी मानिसहरू बनाइन्छ Titans संयोगवश? सबै हुन् Titans उनीहरु सचेत पनि छन् Titans? किन प्रायजसो महिला छैनन् Titans? हामीलाई थाहा छैन र यसले टाइटन्सको बारेमा थप ज्ञानको लागि भोक बढाउँछ।
दोस्रो भ्यानगार्ड क्याप्टेन माइकलाई ३ टाइटन्सले खाए
टाइटन्सले धेरैजसो मानिसलाई असर गर्छ
को बारेमा थप्नको लागि अन्तिम बिन्दु Titans तिनीहरूको प्रभाव मानवमा पनि हुनेछ। म यसलाई पछि थप कभर गर्नेछु तर तपाईले भोग्नुहुने पीडा, तनाव, र भ्रमको कल्पना गर्नुहोस्, निरन्तर थाहा छ कि त्यहाँ यी प्राणीहरू छन् जुन तपाईलाई जीवित खाने मौकाको लागि पर्खिरहेका छन्! यो एक हुनेछ भयानक को नागरिकहरु को लागी महसुस गर्न को लागी भावना र सोच राज्य.
पुरानो सर्भे कोर्प्सका सदस्यहरू पर्खाल बाहिरबाट फर्किन्छन्
अब, यो केवल औसत व्यक्ति भित्रको भावना हुनेछ वाल मारिया र विशेष गरी मा Trost। तर हाम्रो मुख्य पात्रहरूको लागि यो कस्तो हुनेछ कल्पना गर्नुहोस्। सर्वेक्षण कोर्प्स। तपाईं पर्खाल बाहिर हुँदा तपाईंलाई कुनै पनि समयमा खान सकिन्छ भन्ने थाहा छ।
यदि तपाइँको घोडा पर्याप्त छिटो छैन भने, यो तपाइँ हुनुहुनेछ कि खाइनेछ, र तपाइँको घोडा निस्सन्देह कारण हुनेछैन। तनाव र चिन्ता विश्वास भन्दा बाहिर। ए संग जोडिएको निद्राको अभाव, क्यारेक्टरहरू राखिएका सर्तहरू वास्तवमा धेरै विश्वासघाती र कठोर छन्। यो अचम्मको छ कि हाम्रा मुख्य पात्रहरूले यसलाई बनाउँछन् सिजन 2.
टाइटनले लाशहरू लिएर एउटा कार्टलाई पछ्याउँछ
के टाइटनहरूले मानिसहरूलाई खान मन पराउँछन्?
अब, यो तथ्य Titans के मानव पनि धेरै निराशाजनक छ जब तपाइँ हेर्नुहुन्छ कि तिनीहरूले कसरी मानिसहरूलाई मार्छन् र तिनीहरूलाई खान्छन्, वा उल्टो। तपाईलाई थाहा हुन सक्छ, र केही दृश्यहरूबाट एनिमे, यो वास्तवमा तिनीहरूले यो मजा जस्तै देखिन्छ। मलाई बयान गर्न देउ।
धेरै दृश्यहरूमा जहाँ हामी मानिसहरूले खाएको देख्छौं Titans, तिनीहरूको अभिव्यक्ति तपाईंले अपेक्षा गरेको जस्तो होइन। तिनीहरूमध्ये केही उदास देखिन्छन्, तर तिनीहरूमध्ये धेरैको अनुहारमा जंगली मुस्कान छ। यो कहिलेकाहीं एक भयावह मुस्कान संग प्रतिस्थापित गरिन्छ, तर सामान्यतया तिनीहरू देखिन्छन् खुसी केहि मा विकृत प्रकारको तरिका।
टाइटन जसले इरेनको आमालाई खायो
के यसको मतलब तिनीहरूले साँच्चै गरिरहेछन् मानव वा अन्य भावनाहरू? वा यो एउटा अनुहार हो जसलाई तिनीहरूले लगाए पनि शिकार, हिँड्ने, र यात्राको अनन्त यात्रामा निरन्तर अड्किएका छन्। खाने ? जे भए पनि, यो एक धेरै डरलाग्दो कुरा हो जुन तपाईंले हेर्नु पर्छ, विशेष गरी विचार गर्दै टाइटन जसले मार्यो इरेनको आमा ("मुस्कुराउने टाइटन"जस्तै यो श्रृंखलामा उल्लेख गरिएको छ)।
Mikasa ले एपिसोड 1 मा गरेको जस्तै सर्वेक्षण कोर्प्सको जनमानसमा उस्तै छाप छ भनी महसुस गर्छिन्।
किनकि जसरी हेरे पनि । यदि वास्तविक कारण हो Titans मानिसलाई खानु भनेको शृङ्खलामा उल्लेख गरिएझैं फेरि मानिसमा परिणत हुन सकोस्, त्यसोभए किन त्यसबाट यस्तो गर्व र आनन्द लिने ? मेरो आफ्नै सिद्धान्त धेरै छ Titans मा भूमि घुम्दै आएका छन् टाइटन मा आक्रमण लामो समयको लागि कि तिनीहरू बोर र हताश भएका छन्।
महिला टाइटनले आफूलाई आक्रमणबाट बचाउँछ
यदि तपाइँ यसको बारेमा एक सेकेन्डको लागि सोच्नुहुन्छ भने, के तपाइँ उनीहरूले जस्तै चीजहरू गर्नुहुन्छ? कस्तो होला प्रतिक्रिया तपाईं अब एक हुनुहुन्छ भनेर महसुस गर्न टाइटन आफैलाई? किनभने मलाई थाहा छ म के गर्दैछु।
अब, निराशामा जाँदै मेरो मनपर्ने क्षणहरू मध्ये एक हेरौं दोस्रो सीजन। यो त्यो अवधिमा थियो जहाँ भ्यानगार्ड मध्ये एक महिलासँग सम्पर्कमा आउँछ टाइटन। सुरुमा, द टाइटन कुनै पनि धम्की छैन। निश्चित क्यारेक्टरहरू पछ्याउन मात्र छनौट गर्दै। तर हामी चाँडै सिक्छौं कि महिला टाइटन कुनै पनि मानवलाई मार्न कुनै समस्या छैन जुन यसको मार्गमा आउँछ र यसलाई आफ्नो समग्र उद्देश्य पूरा गर्नबाट रोक्छ।
एरेनको आमालाई खाएको टाइटन देखिन्छ
भावनाहरु संग खेलौना कसरी 101
अब त्यहाँ एक क्षण छ जहाँ भ्यानगार्डबाट 1 सिपाहीले यसलाई जीवित बनाउँछ। उसले भर्खरै देखेको कुराको बारेमा बाँकी संरचनालाई चेतावनी दिन सक्दो छिटो सवारी गरिरहेको छ। उसले भर्खरै आफ्नो सम्पूर्ण टोलीको पूर्ण पराजय देखेको छ र सोच्दछ कि ऊ मात्र बाँकी छ। यो यस्तो डरलाग्दो क्षण हो तर हामी राहत र उत्साह महसुस गर्छौं किनभने हामी सोच्छौं कि उहाँ टाढा जाँदै हुनुहुन्छ र अरूलाई चेतावनी दिनुहुनेछ, उहाँ आफैले भन्नुहुन्छ।
हामी साँच्चै सोच्दछौं कि उसले यसलाई अरूलाई फर्काउनेछ र उसले भर्खरै देखेको कुराको बारेमा तिनीहरूलाई बताउनेछ। हामी त्यो सोचिरहेका छौं ईरेन यसबाट सिक्नेछ र लिनेछ महिला टाइटन। तर त्यसपछि, उसले आफ्नो वाक्य समाप्त गरेपछि, केहि हुन्छ। त्यसपछि - ओहोश... ऊ गयो। हावामा उचाईमा बुट गरियो, फेरि कहिल्यै नदेखिने।
महिला टाइटन रेनरलाई सम्मान गर्दछ
तिनीहरूले त्यहाँ के गरे तपाईंले देख्नुहुन्छ? यसले एक मिनेट मात्र लिन्छ तर त्यो धेरै छोटो समयमा, तिनीहरूले रोलर कोस्टरमा तपाईंको भावनाहरू लिएका छन्। भवन एक भावना र त्यसपछि पूर्ण रूपमा मुंहतोड यो अर्को संग। यो शानदार छ! त्यहाँ धेरै समय छ जहाँ AOT ले यो गर्छ र तिनीहरू सामान्यतया सधैं प्रयोग गर्छन् Titans गर्न को लागी।
अहिलेको लागि यति हो!
यो विच्छेदन र मूल्याङ्कन अद्भुत भएको छ Titans. टाइटन मा आक्रमण साँच्चै हेर्न को लागी एक महान एनिम भएको छ र यो छ पक्कै पनि को एक सबै भन्दा राम्रो एनिमे मैले मेरो एनिमे हेर्ने यात्रामा देखेको छु। यो लेख धेरै लामो छैन भनेर सुनिश्चित गर्न हामी यसलाई दुई भागमा काटेर अर्को भाग चाँडै पोस्ट गर्दैछौं। कृपया हाम्रो न्यूजलेटरको सदस्यता लिनुहोस् ताकि तपाईले कुनै पनि अपडेट नछुटाउनुहुनेछ र हामीले नयाँ लेख पोस्ट गर्दा अपडेट हुनुहुनेछ। तपाईं तल यो गर्न सक्नुहुन्छ:
टाइटन मा आक्रमण एउटा शृङ्खला हो जुन Cradle View मा लामो समयसम्म छलफल गरिनेछ। पढ्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद, सदस्यता लिन नबिर्सनुहोस् ताकि तपाईंले कुनै पनि अपडेट नछुटाउनुहोस्, तपाईंको दिन राम्रो रहोस् र सुरक्षित रहनुहोस्!
अघिल्लो प्रविष्टि भाडा-ए-गर्लफ्रेन्ड मंगा कहाँ पढ्ने
अर्को प्रविष्टि Yame Yukana चरित्र प्रोफाइल